Warqad Furan oo hogaaminta Degaanka Soomaalida Ku socata, uuna dirayo xildhibaan kusugan magaalada Jigjiga kana tirsan baarlamaanka deegaanka!! | Faafan News
July 12, 2018 | Filed under: dhacdooyinka,WARARKA MAANTA,WARARKA MAANTA | Posted by: admin
Bisha July 11, 2018, Jigjiga.
Ku: Afhayeenka Golaha Shacabka Degaanka Soomaalida Itoobiya – Jigjiga
Og: M/weynaha Degaanka Soomaalida.
Og: Dhamaan Xubnaha Golaha Xildhibaanada Degaanka Soomalida Itoobiya – Goobtooda
Afhayeenka Sharafta leh, Mudane Madax weyne iyo Xildhibaanada Sharafta shacabka huwan;
Waxaan joognaa xilli aad u khatar badan degaankeena iyo wadankeena gudihiisa, oo la socda jawi siyaasadeed iyo dhaqaale oo Itoobiya wada saameeyey.
Runta iyo beenta faraqa u dhaxeeya ayuu muran galay, Sidaa darted haddii uu jiro waqti in laga hadlo ku haboon xaalka hogaaminta iyo degaanka Soomalida, waa hadda. Waxaana xilkaasi si gaar ah dusha uu uga saran yahay xisbiyiinta iyo Xildhibaanda degaanka.
Mudanayaal, waxaan ahay Xildhibaan sharafta iyo amaanada shacabka huwan. Xubin Xisbina waan ahay. Shirka maanta inooga bilowday golaha xil dhibaanada waa mid ku bilowday xaalad ka baxsan xeerka iyo nidaamka u yaala Golaha sababahan soo socda awgeed.
1) Shirka waqti loo qabtay oo cayiman ma jirin, haddii ay jirtay xataa waqtigiisii laguma bilaabin. 2 saacadood in ka badan ayeey xildhibaanadu banaanka taagnaayeen.
2) Ajendaha shirka marka la ansixiyay ka dib ayaan ajenda aan meesha ku jirin mudo 2 saacadood in ka badan dhageysaneyney. Baaqa is cafis ee Raisul Wasaaraha JDFI Dr. Abiy iyo cabsida Getachew Asefa hogaaminta degaanku ka qabtay ayaa ina loo sheegay shalay.
Is cafiska RW Dr. Abiy ku baaqay Getachew kuma jiro miyaa? Cafisku waa mid guud oo anaguna ka mid nahay hadaan fahamnay. Xeer dhigaya qodob aan ajenda ku jirin 2 saacadood dhageysano malaha .
Waana meel uga dhac sharafta golaha inaan dhageysano fal shaqsi jagada laga qaaday inaan maanta ku abaadno. Weliba iyada oo aan ku jiro xilli xasaasi ah oo ay tahay in laga tashto arimo muhiim ah oo shacabka degaanka saameyn weyn ku leh.
3) Waxaan hogaaminta ka dhageysaney inay cabsi badani ka haysatay Getachew iyaga iyo dad kaleba. Ayna ka hadli karin waayeen fafalkiisa faragelinta. Miyaynan ogeyn in xildhibaanadu cabsi darted u hadli la’iyihiin?
Inay wax dhageystaan mooye aan la dhageysanin gaar ahaan cida doonaysa inay dhaliisho qaab socodka hogaamineed ee degaanka.
Haddaba waxaan ku talin lahaa:-
B. In laga waantoobo wax meel ka dhac ku ah golahan sharafta leh oo aan ajando loo ansixinin lagaga hadlo.
T. In ajandayaal muhiim ah lagu soo daro shirka beri la qaban doono oo kala ah:-
1. Is bedelka Itoobiya ka socda iyo degaanka waxa la gudboon guud ahaan iyo gaar ahaan Xiriirka aan la leenahay degaanka Qowmiyada Oromiya ee aan deris iyo walaalaba nahay.
2. Ka dhageysiga xildhibaanada war bixinta waxa ay ku soo arkeen deegmooyinka xilligii ay kormeerka ku soo mareen dhowaan. Ka hadalka ajandayaashani waxay ila tahay mid xiliga la socoda. Cabsida aan ka gudubno oo aan si saraaxad leh u wada hadalo. Khaladka lagalay waa in la qirtaa. Waxna laga bartaa. Haddii kale waa jugjug meeshaada joog.
Xasarada ha laga qaado Cabdidheere, waa mucaarad hadii ay arintu noqoto Isbedelka Itoobiya ka socoda hogaaminteenu weli lama ay jaan qaadin. Tala soo jeedin mucaaradnimo ma’aha. Isbedelka Itoobiya oo dhan u baahatay degaankeenu ma ka baahi la’yahay?
Xildibaan: Cabdi Cabdulahi Xuseen (Abdidheere) – Degmadda Gurra Dhaamole
Tele: 0911 212075